ခြင်္သေ့ ဆိုတာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခြင်္သေ့ ဆိုတာ
Posted by Mahar Myanmar on Oct 31, 2013 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 19 comments
ချယ်လ်ဆီးမန်နေဂျာ ဂျိုဆေး မော်ရင်ဟို …
လန်ဒန် က အပြာရောင် တပ်ဖွဲ့ ရဲ့ ကွန်မန်ဒါ က သူ့ရဲ့ ခြင်္သေ့ပြာ တွေ ကို Capital One Cup ဖလား စတုတ္ထ အဆင့် အာဆင်နယ် နဲ့ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ရာ မှာ အလှည့်ကျ ထုတ်သုံး သွား ဖို့ စိတ်ကူး ပုံဖေါ်ထား ပါ သတဲ့ ။ ပွဲဆက် တွေ က များ လာ ချိန် မှာ ..အင်အား ကို ချိန် ညှိ သုံး တတ် ဖို့ ဆို တာ ဟိုဆေး အတွက် တော့ ထမင်းစား ရေသောက် လောက်ပဲ ဖြစ်မယ် ထင်ပါရဲ့ ..။
ဂျူအန်မာတာ ၊ မိုက်ကယ်အက်ဆီယန် ၊ ဒမ် ဘားဘ နဲ့ သြဇီ ဂိုးသမားကြီး မာခ်ရှဝါဇာ တို့ ကို ဟိုဆေး က အာဆင်နယ် နဲ့ ပွဲမှာ ပွဲ ထုတ်မယ့် အကြောင်း အသိပေးပြီး ဆိုသော် လည်း..တကယ် ပွဲထွက်လာတော့ ဘတစ်ယောက် တော့ကျန် ခဲ့ပြီး သူ့အစား တိုက်စစ်မှူး အီတိုး ပွဲထွက်လာ ခဲ့ ပါတယ် ။ မန်စီးတီး နဲ့ ပွဲတုန်းက ပွဲထွက် ၁၁ ယောက် မှာ ကာဟေးလ် တစ်ယောက် ပဲ ပြန် ပါလာပါတယ် ။ ဆိုလို ရရင်တော့ ကွန်မန်ဒါ ဟိုဆေး အတွက် အေ တပ်ခွဲ အပြင် အခု အာဆင်နယ် ပွဲမှာ တော့ ဘီတပ်ခွဲ ကို သီးခြား သုံး သွားတယ်လို့ ပြောဆိုနိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်. အေ ဘီ သာ ခွဲလိုက်မိပါတယ် တကယ်တန်း မှာ တော့ အာဆင်နယ် ကွင်း မှာ ချယ်လ်ဆီးရဲ့ အပြာရောင်တပ်ဖွဲ့ ဘီတပ်ခွဲ ဟာ အေ တပ်ခွဲ နဲ့ ထပ်တူ နီးနီး ခံစစ် တိုက်စစ် မျှခြေ ညီစွာ ဂန်းနား တို့ ကို ခြေမှုန်း ပစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ အရင် အတိတ် တုန်း ကလည်း ခြင်္သေ့ပြာတွေ ဟာ ဂန်းနား တွေ ကို နောက်ဆုံး သုံးပွဲတွေ့ဆုံမှု တွေမှာ ထောင်စုနှစ်ကွင်း ၂၀၀၇ ဗိုလ် လုပွဲ အပါအ၀င် အ ရှုံး / သရေ မရှိ အနိုင် ခြေမှုန်း ထား တာ ဟာ ခြင်္သေ့တွေ အတွက် တော့ ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိ နေမယ် ဆိုတာယုံမှားသံသယ မထား လိုက်ကြပါနဲ့ ။
စနေ နေ့ ပရီးမီးယား ပွဲစဉ် နဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် တွေ ဟာ လည်း နောက် မှာ ဆက်တိုက် ဆီးကြို နေ ပါပြီ ။ သေချာတာကတော့ ဟိုဆေးအတွက် ..ဘယ်သူ တွေ ကို ဘယ် ပွဲ မှာ ထုတ်သုံးပြီး ဘယ်သူတွေ ကတော့ အနားရမလဲ ဆိုတာ အဖြေ ရှိပြီး ဖြစ်ပါ လိမ့် မယ် ။ ဘယ်လိုပဲ ပွဲဆက်တွေ လာပါစေ ဟိုဆေး အတွက် လူအင်အား လုံလောက်စွာ နဲ့ အေတပ်ခွဲ ဘီတပ်ခွဲ တို့ ဟာ.. စွမ်းရည်တူ ရှိ နေတာ.ကြောင့် သိပ်ပြီး ကြောင့်ကြ စိုးရိမ် နေလိမ့် တော့ ထင် မထားပါဘူး ၊ ဒါ ဟာ ဟိုဆေး ကံကောင်း တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ သူ ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက် ယူနေတာ ပါ ။ သေချာ တာ တစ်ခုကတော့ အဲဒီ တိုက်ပွဲနှစ်ခု လုံး အတွက် အေတပ်ခွဲကို ချည်း မသုံးသလို ဘီတပ်ခွဲကိုချည်း ပဲလည်း နှစ် ပွဲလုံး မတိုက်ခိုင်း ပါဘူး ။
နယူးကာဆယ် နဲ့ ပွဲ မှာ စောစောစီးစီး ရလဒ် ဖြတ် နိုင်အောင် ပွဲကို စိုးမိုးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက် နိုင်မယ့် လူစာရင်း အေ ဘီ နှစ်ခု က သူ ရွေးထုတ် ပါလိမ့် မယ် ။ အနိုင်သေချာ ပြီ ပွဲကို လိုသလို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီ ဆိုရင်တော့ … နောက်ပွဲ ရှော်ကဲလ် နဲ့ အတွက် ရှယ် သုံးယောက် ကတော့ လူ စား လဲ အနား ပေးခံ ရ ပါလိမ့် မယ် ။
ဟိုဆေးဆိုတာ ချယ်လ်ဆီးရဲ့ ပထမနှစ်မှာ တင် လီဗာပူးလ် ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဆုဖလား ကို ကိုင်မြောက် ပြနိုင် ခဲ့တာပါ ..။ အဲဒီ အရင်နှစ် နှစ် က ဆိုရင် လီဗာပူးလ် က (၈) ကြိမ် ၊ အက်စတွန်ဗီလာ က ( ၅) ကြိမ် ၊ ချယ်လ်ဆီး တို့ (၄) ကြိမ် အသီးသီး အောင်မြင် မှု ရှိထား ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အေစီမီလန် မန်နေဂျာ မတ်စ် မီလန်နို အယ်လီဂရီ ကတော့ သူ့ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဘားလော့တယ်လီ အေစီ ကထွက်ခွါ မှာ မဟုတ်ပါဘူး တဲ့ … စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျ ကို လည်း ရောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး တဲ့ .။ ဘယ်က ဘယ် လိုကြောင့် ငြင်းချက် ထုတ် ရသလဲ ဆိုတာ အခု မသိနိုင်ပေမယ့် လာမယ့် ဈေးကွက် အတွက် အ၀ယ်တော် အေးဂျင့် တွေ က အခုကတည်း ခြေပုန်း ခုတ် နေကြပြီလား ဆိုတာ ..စိတ်ဝင်စား စရာပါ ။
ဒေါ့မွန် ကလည်း သူရဲ့ ၂၅ နှစ်သား ပိုလန် တိုက်စစ်မှူး လီဝန်ဒေါစကီး ကို လာမယ့် အပြောင်းအရွှေ့ကာလ မှာ ပေါင် (၇) သန်း ပါတဲ့ ။ ကြားရတဲ့ သတင်း ကတော့ ရာသီ အကုန် လီဝန် ကို သူတို့ရဲ့ မဟာပြိုင်ဘက် ဘိုင်ယန် ဆီ အလကား ပေးရမယ့် အစား တစ်ခြား လိဂ် က အသင်း များ ဆီ ရောင်းထုတ် ကာကွယ် ချင်တာ ပါ ။ လီဝန် ဟာ ဒီထက်မက တန်ဘိုး ရှိ တဲ့ ကစားသမား ဆိုတာ လူတိုင်း သိ နေကြတာမို့ လာမယ့် ဈေးကွက် က လီဝန် လုပွဲ ကို အကြီး အကျယ် ရှုစား ရတော့ မှာ ပါ ။
ပြင်သစ် က PSG ကလည်း ချယ်လ်ဆီး က မာတာ ကို ရေနံ နဲ့ လဲလှယ် ဖို့ ချောင်း မြောင်း နေပါ သတဲ့ ။ သူတို့ ကတော့ မာတာ ဟာ ဟိုဆေး ရဲ့ ပထမ တပ်ဖွဲ့ မှာ မပါလို့ ရိုမန် ကို ရေနံ တွေ ပေးရင် ရမယ် ထင် နေပုံ ပါ ဘဲ ။
ဥရောပ မဟာပြိုင်ဘက် ဘာစီိလိုနာ ကတော့ ချယ်လ်ဆီး ရဲ့ လူငယ် ဘယ်လ်ဂျီယန် ဂိုးသမား ကော်တိုးရစ် ကို အလစ်သုတ် ဖို့ ချောင်း နေပြန် ပါပြီ ။ ခက်တာ က ချယ်လ်ဆီး ဆိုတာ ကလည်း ရိုမန် ရဲ့ အသည်းနှလုံး ။ ငွေ လိုချင် လို ရင်းနှီး မြှပ်နှံတဲ့ သူဌေးတွေ ထဲ မှာ ရိုမန် မပါဘူး ဆိုတာ သူတို့ သိရဲ့ နဲ့ ငွေ တစ်ပြပြ လုပ် နေတာ ..ချယ်လ်ဆီး အတွက် တော့ ရယ်စရာ ဖြစ်နေ တော့တာ ပေါ့ နော့ ။ ဟိုဆေး ကလည်း ရှင်းတယ် သူ့ ဂိုးသမား လေး က ချယ်လ်ဆီး အနာဂါတ် တဲ့..ဘာကာ မင်း မောရုံပဲ အဖတ် တင် မယ် တဲ့ ။
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကလည်း ၀ယ် မယ် ထင်ပါရဲ့ ။ တိုက်စစ်မှူး တောရက်စ် ပြန်လာ ပေမယ့် အီတိုး က အသက်အရွယ် အရ ပြန်လာလို့ မရနိုင် တော့ဘူး ။ အီတိုး အတွက် ဒါ ဟာ သူ့ရဲ့ လုပ်အား ကုန် ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်
မယ် ။ ဘ ဆိုတာ ကလည်း ဟို ဆေး အတွက် တော့ အားကိုးလောက်စရာ မဟုတ်လေတော့ ရေရှည် မှာ တောရက်စ် တစ်ယောက် ဒါဏ်ရာ ထိခဲ့ ရင်.. ပွဲစဉ် တွေ အတွက် ရင်လေး စရာပါ ။ အလယ်တန်း က ဂိုးသွင်းတယ် ဆိုပေမယ့် ဒါ ဟာ..ပုံမှန် မဟုတ်ပါဘူး ..။ သူ့နေရာနဲ့ သူ အရည်အချင်း မှီမှီ ဖြစ်နေဖို့ ဟိုဆေး က အလိုရှိမှာ ပါ ။ ဒီတော့ တိုက်စစ်မှူး တစ်ယောက်တော့ ရောက်လာဦး မယ် ထင်ပါရဲ့ ။
အလယ်တန်း ဆို တာတော့ ပြောစရာ မရှိပေမယ့် လမ်းပတ် ရာမီးရက်စ် ဒိ ထက် .. ပိုပြီး စွမ်းဆောင်သင့်တယ် ။ အသင်းကြီး တွေ ဆို သူတို့ ပျောက်နေတတ် တာ ဟာ ဟိုဆေး အတွက် ပုစ္ဆာ တစ်ပုဒ် ပဲ မဟုတ် လား ။ နောက်တန်း မှာ တော့ အက်ရှလေကိုးလ် က နောက်နှစ် ဆို မသေချာ တော့ဘူး ။ခြေစွမ်း ကျန်ပါ့ဦး မလား ပဲ။ သူ့နေရာအစား ထိုး နိုင်ဖို့ ဘာထရန့် များများ ပွဲထွက် ပြီး အတွေ့အကြုံ ရဖို့ လိုအပ်နေတာ ဟိုဆေး သိမှာ ပါ။
လတ်တလော မှာ တော့ ခြင်္သေ့ပြာတို့ ရဲ့ ကွန်မန်ဒါ ဟိုဆေး ကို အောက်တိုဘာ အကောင်းဆုံး ကွန်မန်ဒါ ဆု ပေး လိုက်ကြရအောင် လား .။ သူ ဟာ ဒိ ထက်မက ထိုက်တန်ပါတယ် ။ ရီးရဲလ် က ထွက်ခွါလာချိန် မန်ယူ မန်စီးတီး ကလည်း တံခါးဖွင့် လို့ ဟိုဆေး များ သူတို့ဆီ လာ လေ မလားရယ် လို့ မျော်လင့် ချက် မျက်ဝန်းတွေ နဲ့ စောင့်စား ခဲ့ တာတောင် ..သူ့ ရဲ့ အိမ် .. ဟုတ်ပါတယ် ဟိုဆေးရဲ့ အိမ် ချယ်လ်ဆီး ကို ပြန်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ ။ ဟုတ်ကဲ့ ငါးမိနစ် ပါဘဲတဲ့ ။ ဟို ဆေး အသုံးချခဲ့ တဲ့ အချိန် စုစုပေါင်း က ငါးမိနစ် ပါ။
အဲဒီလို နဲ့ ဟိုဆေး ချယ်လ်ဆီး ကို ရောက် ..ပရီးမီးယား မှာ ပွဲဆူမယ် ကြံ ကာမှ ပြိုင်ဘက် ဖာဂူဆန်ကြီးက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အနားယူ သွားတာ အခု ဆို ပြိုင်ဘက် မရှိ နဲ့.. ဟက်ပီးဝမ်း မဟက်ပီး နိုင်တော့ တာ..သနားစရာ ပါ ။ ဖာဂူဆန် ကြီး ရှိ လို့ ကတော့ ပရီးမီးယား က ဒီထက် ပွဲ ဆူ မှာ သေချာ ပါတယ် ။
( Posted on October 29, 2013 by deke by deke
http://www.ilovechelsea.net/mourinho-set-to-rotate-ahead-of-arsenal-clash/ ကို ကိုးကား ပါသည် )
ခြင်္သေ့ ဆိုလို့ အင်္ဂါ ဒမီး က လာကြည့်တာ။
နာ့ အကြောင်းလည်း မဟုတ်ပါလားးးးး
ိတိန်.. ဥဿာ စိန်ပန်း ဒန်းလှ ကိုရှာ တဲ့…
အင်္ဂါ သမီး ဆို တော့ စိန် ပန်းရှာရမယ်..
အင်္ဂါ နဲ့ ကြာသပတေး…
လာကပ် တဲ့ အကောင် တွေ ကို မေး လိုက် ။
ကြာသပတေး ဖွား လား လို့ ။
ကြာသပတေး သား မဟုတ်ရင် လက်မခံ နဲ့..
( ဘောလုံး ဘက် ဓါတ်ကျ နေ ပါသည် )
လီဝန် ဒေါစကီး သာ ချယ်ဆီး ရောက်လို့က တော့ နောနော် ပေါ့ဗျာ …အဲလေ ယောင် လို့၊ အတိုင်းထက် အလွန် ပေါ့ဗျာ …
ကျွန် တော့ အမြင် ပြောရ ရင် တောကြက် နဲ့ ကစား ပေါက်မတူ တဲ့ တိုက်စစ်မှူး တစ်ဦး လောက် ပါ ထပ်ဝယ် သင့်တယ် ။
တောကြက် နဲ့ ကစား ပေါက် တူ မတူ တော့ မသိ ဘူး.. လီဝန် ကစားပုံတော့ ကြိုက်သဗျ..
လီဝန် ထက်ရောက်လာရင် ချယ်လ်ဆီး တိုက်စစ် ဒိထက် ပိုကောင်း လိမ့် မယ်
ဘာမန်ယူလဲ ..မုန်းချက်က အသဲထိတယ်…အိမ်ကအဖေနဲ့အမေက မန်ယူအသဲစွဲ …တစ်ခါသား ဒါဘီပွဲမှာ မန်စီတီးအားပေးမိလို့ ..ထမင်းအငတ်ထားခံထိဖူးတယ်….အဟိဟိ…
ဆောရိုး ရေ မန်ယူ တွေ က နေရာတကာ မှာ..
အများ သား လား ဗျ…
အဲဒီလို လူများ လို့ လည်း ကျွန်တော် က ဆန့်ကျင်ဘက်
ဖြစ်သွား တာ ထင်ပါရဲ့..
မန်ယူ အားပေး တဲ့ မိဘ တောင် သားသမီး ကို
အစွန်းရောက် ဆက်ဆံ တာ ဆိုတော့..
ကျန်သူ တွေ ကို သတိ ထား ဗျို့..
အေးအေး ချမ်းချမ်း ပဲ ကိုယ် နှစ်သက် ရာ အားပေးကြပါ ဗျာ..
မြန်မာပြည်မယ်.. ခြင်္သေ့ဆိုတဲ့အကောင်… လက်တွေ့မရှိပဲ.. ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်က.. ရေးဟောပြောပြလိုက်သလည်း…. လို့…
သီဟဗာဟု ဖြစ်မှာပေါ့ သူဂျီးရဲ့
ခြင်္သေ့ဆိုတဲ့ အကောင်ကို အာဖရိက ကနေဖမ်း ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်း
ဒေသတွေရောက်။ နောက် အိန္ဒိယ ရောက်။ ဗမာပြည်ဘက်ကတော့
လေသံဖမ်း တရားနာမယ် ထင်တယ်။ ပဒေသရာဇ်များက ဟို အကောင်
နဲ့ ဒီအကောင် ကိုက်ခိုင်း၊ သတ်ခိုင်း၊ ဝှေ့ခိုင်း ပြီး အရသာခံကြည့်ကြမယ်။
အာရှဘက်တော့ ကျားပဲရှိမှာ။ အာဖရိက က ခြင်္သေ့နဲ့ ကိုက်ခိုင်းမယ်ပေါ့။
(တကယ်သတ်ရင် အမြဲ ကျားပဲ နိုင်တာ။) ခြင်္သေ့ကတော့ လည်ဆံဖားဖား
နဲ့ ခန့်ခန့်ညားညား၊ အိနြေ္ဒကြီးတစ်ခွဲသား။ ကျားကတော့ ကုပ်ချောင်းချောင်း။
ဆိုတော့ ရှေး အိန္ဒိယသားများ စာတင်တော့ ခြင်္သေ့ပဲ။
မြန်မာပြည် က ခြင်္သေ့ ဆိုရင် စာရွက်ပေါ်က ကောင် ကို ပဲ တန်ဘိုးထားတယ် ဗျာ..
ဆင်တို့ ခြင်္သေ့ တို့ ပေါ့..
ကျန် ခြင်္သေ့ ကတော့ .. ဂရုကို မစိုက် ချင်ဘူး
(ဇူး) ထဲ က အကောင် ပြော ပါတယ် နော်…
ယုံ ထင် ကြောင် ထင် နဲ့
အထင် တွေ လွဲ မသွား ကြပါ နဲ့..
ဘုရား ရှေ့ က ကောင်ကြီး တွေ က အခု ထိ ကျွန်တော်
အထီး လား အမ လား မခွဲတတ် သေး လို့
ပို့စ် ရေး မတင် နိုင် သေး ကြောင်း ပါ
အရိပ်စစ် စစ်စစ် ကလေး ရေ
ချင်သေ့တွေများ မြင်ရပြီလားလို့ 
အေး လေ .. နာ လည်း ချင်သေ့ အကြောင်း ပဲ ပြော နေတာ ပါ
နင် ဘယ်ချင်သေ့ သိ ချင် ကြည့် ချင်နေတာ တုန်း ..
ခြင်္သေ့ ဆိုတာ …
အင်းဂလိတ်လို လိုင်းယွန်း လို့ ခေါ်ဘာဒယ် …
လိုင်းယွန်းပြာတွေဆီ ဟိုလူဂျီး တစ်ကျော့ပြန် လာဂျိန်မှာ
ဒီဗေးနီကြီးကတော့ ဂိုးသွားပြီ ….
ဒီဗေးနီကြီးသာ မဂိုးသေးရင် မိုင်းဂိမ်းတွေ အတော်ကြီး မြိုင်နေလိမ့်မယ် ထင်ဒယ် …
ကျုပ်ဟာ လိုင်းယွန်းပြာ ပရိသတ်ပါ …
ပြောလိုက် စမ်းဘာ ကိုအံစာ
ခြင်္သေ့ ဆိုတာ ခြင်္သေ့ ပါ လို့
ကြွက် မှ မဟုတ် ဘဲ နော့…
ကိုယ့်ဟာကိုယ် နေနေတာတောင် လာ တိုက်ခိုက်လွန်းလို့ ဟီဟိ
Glory……Glory…..Man United !
ကိုယ် နှစ်သက်ရာ အားပေးတာ ပဲ ဗျာ..
ပြိုင်ပြိုင် ဆိုင်ဆိုင် လေး က စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းပေမယ့်
အသင်း ကြီးတွေ က ဘာမှ မဖြစ်ဘူး
ဖန် တွေ ..တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု
တီး နေ ကြတာ တော့ အစွန်း ရောက် နေကြသလို ပါဘဲ ဗျာ..